महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हेतुले ह्याम्स हस्पिटल सँग मिति २०७६/०३/२४ गते एक सम्झौता गरेको छ । बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ प्रबन्धक श्री प्रकाश घिमिरे ज्यू र अस्पतालका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री आर. एस. भण्डारी ज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
उक्त सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक, कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार ले हयाम्स अस्पतालमा विभिन्न विधाका स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराउँदा सेवाशुल्कमा १०% सम्मको छुट पाउनु हुनेछ । यसका साथै वहाँहरुले ह्याम्स फार्मेसीमा औषधी खरिद गर्दा ५% सम्मको छुट पाउनु हुनेछ ।
देशका ९६ वटा शाखाहरुबाट बंैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. ले आगामी दिनहरुमा उक्त अस्पतालसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु गर्दै जाने सहमति गरेको छ ।